Warbixin dhab ah oo ku saabsan Soomaaliya – Balcad.com Teyteyleey
Walaalayaal aniga waxaa la yiraahdaa Galib Ramathan. Waxaan ku dhashay Magaalada Muqdisho, Soomaaliya bishii Janaayo 1st, 1981. Magaaladan muqdisho waxaa ka dhacay dagaal sokeeye. Kaasoo saameeyey wadanka oo dhan. Intii uusan dagaalku xoogaysan waxaa dhacday arrin la yaableh. Arrintan oo ay ka dhacaday isla magaalada Xamar. Gabadh aanu daris ahaan jirnay markii aan ku noolayn, Soomaaliya. Gabadhan oo dibadda wax looga dirsaday. Intii dibadda ay ku maqnayd ayaa aqalkoodda madfac lagu dhuftay. Reerkan gabadhan ayaa ka badbaaday. Waxaanuna markaas wada deganayn xaafadda Huruwaa oo ka tirsan Magaalada Muqdisho, Soomaaliya. Wakhtigunna waxa uu ahaa bishii Diseembar sanadki 1990kii.
13 Waxaa soo xasuustaa subax walba waxaa cuni jirnay canjeelo iyo shaah. Soomaaliya haddii noo hagaagto waxaan jeclaan laheyn in aan ku laabano wadankeeni hooyo dhamaan dad weyna soomaaliyeed meel walba ee joogaan dunida.
15 Waxaa soo xasuustaa saacada casarka waxaa soo booqan jiray qaraabadayda. Waxaa ku fariisan jiray jeedka hoostiis ayaan ku raaxeysan jirnay intaa shaah ama qaxwo karsano, haddaa soo xasuusto mararka qaarkood waa iska ooyaa.
20 Waagii ee soomaaliya nabada ahayd ee dowaladii Siyaad Barre waxaan ahayn dad qaali ah oo sharaf leh oo dunida oo dhan kadambayso laakiin maanta anagaa ayaa dunida ugu lidana. Mar walba oo aan salaad tukado waxaan ilaahay ka baryaa in uu kadhaliyo dowlad Muslim ah oo daacad ah. Cadogeyna ilaahay hajabiyo. Kuwa isdagaalaaya ilaahay qalbigooda ha isku jeediyo dhaxdooda ilaahay nuur hadhaxdhigo. Soomaaliya see ahayn jirtay iyo si ka fiican ilaahay haku soo celiyo?
21 Magacayna iyo calan keeni Soomaaliya ilaahay hanoo soo celiyo? Ciidamadda Kanadiyaanka iyo Maraykan ayaa tagay Soomaaliya sanadkii 1993kii waxay yiraahdeen waxaan Soomaaliya ku soo celinaynaa rajo, laakiin wadankaan dad ma laha. Waxay arkeen nimcadda wadankeenna, wabiyadiisa, beerahiisa, badiisa uu ilaaheey ku manaystay. Mar walba oo aan salaad tukado waxaan baryaa ilaahay weyn rahmaan.
28 ilaahay wuxuu yidhi is jeclaada isku naxariista ha idin naxariistee, ilaahay wuxuu yidhi dhulka iskugu naxariista anigana samada ayaa idinku naxariisanayaa? waxaana ka fagaataan dhiiga bina aadanka.
29 ilaahay wuxuu yidhi qofkii Muslim u miciino muraadkiis wuu helaa. Maslaxada aa suubsatid adduunka ayaa aakhiro ku meel mareysaa waxaana gacantaa midig aa ka dhiibatid aakhiro miisaanka ayaa lagu kabaa?
31 Inta anaga isku maqan nahay ayaa khayraadka badeena la dhameestay. ilaahay hana asturo. Wixii camal wanaagsan oo ilaahay If you want to save on the buying of your cialis Jelly, you should find someone reliable. We’ve got the best deals, and you can buy your cialis Jelly for 4.1 at our store! weydiisatid waa heleysaa aakhiro? Aduunkaan waa wax yar qof joogaayo ma jiro.Qof walba wuu dhimanaayaa saacadiisa haddii dhamaato. sheekadeeda intaas ayaa ku soo gaba-gabeeyey.
Fadlan ila soo xariir haddaa su’aal qabtid. Waa mahadsantahay.
waxaa kuu rajeynayaa kheyr.
Please visit at www.galibramathan.com